विविध – Ram Kumar Pariyar
Current Page: विविध
२०७२ भाद्र २१
एउटा मुर्तिकार कतै जाने क्रममा थाकेर लखतरान भा बेला डम्म परेको रुखमुनी शितल छाँया भेट्छ । सुस्ताउँदै त्यही ओत लागेर विश्राम लिन्छ । उ बसे नजिकै रहेका केही चिल्ला पत्थर माथी उसको नजर पर्छ । उसलाई त्यो पत्थर खोपेर केही बनाउने विचार पलाउँछ ।...
आज आमाको मुख हेर्ने दिन। अङ्ग्रेजी भाषा नै चलाउन रुचाउनेहरुले आजको दिनलाई मदर्स डे पनि भन्ने गर्छन्। फेसबुक र ट्विटरतिर आज आमा, मम्मी, ममको फोटो राख्नेे लहर चलेको छ। साथीकी आमा चिन्नुहुन्न ? आज सोसल मिडिया छिरिहाल्नुस्। जन्म दिने आमाको तुलना कसैसँग हुन सक्दैन...
२०७१ चैत्र २५
एक दिन नाथेनायल हार्थन निराश हुदै घर आएर पत्नी सोफियालाई सुनाए कि उनलाई नोकरीबाट निकालियो, अब उनी असफल बनिसकेका छन् । यो सुनेर सोफिया दुःखी भइनन्, बरू खुसी हुदै भनिन्, ‘अब तपाईले आफ्ना पुस्तकहरू लेख्ने समय पाउनुभयो ।’ ‘हो’ नार्थनले लामो स्वास फेर्दै भने,...
१५ जनवरी,यु.ए.ई । आज माघ १ गते,अर्थात माघे सङ्क्रान्ति जसलाई मकर संक्रान्ती पनि भन्ने गरिन्छ । आजको दिनको नेपाली समुदायमा विशेष महत्व रहेको छ । यो पर्व पवित्र जलाशय , नदी, तथा त्रिवेणीमा स्नान र पूजापाठ गरि घिउ,चाकु, तिलको लड्डु र तरुल खाएर मनाइँदैछ...
मानिसहरुले आफ्नो स्वास्थ्य (Health) को निक्कै हेरचाह गर्नु पर्ने हुन्छ, र हामी पनि आफु स्वस्थ्य रहनको लागि अनेक प्रकारको उपायहरु अपनाउने गर्दछौ | कतिपय हामीले आयुर्वेदिक औसधि हरु प्रयोग गर्ने पनि गरेका छौ, आज म तपाइहरुलाई केहि उपायहरु बताउदै छौं , जुन तपाइले व्यवहार...
प्रत्येक मानिसको जिवनमा सफल हुने चाह रहेको हुन्छ र यसको लागि मेहनत पनि गरिरहेको हुन्छ । तर कहिलेकाही सही मार्गनिर्देशनको कमिले त्यो मेहनत बालुवामा पानि हालेसरी खेर जान्छ । हामी तपाईको मेहनत त्यसै खेर जानुहदैन भन्ने पक्ष्यमा छौ । त्यसैले सफलताको कामना सहित जीवनलाई...
बाल मनोविज्ञान र अभिभावकत्व
एउटा प्राथमिक विद्यालयकि शिक्षीका (मिस) ले एकदिन कक्षा तिन का विद्यार्थी सँग परिक्षा लिईन । परिक्षामा एउटा मनोविज्ञान सँग सम्बन्धित प्रश्न पनि सोधिएको थियो । प्रश्न: “यदि मेशिनबाट मान्छेलाई पनि उसले चाहेको सामान बनाउन मिल्ने भए तिमी चाही के बन्थ्यौ ? र किन ?” परिक्षा जसै...
एकपटकको कुरा हो कुनै एउटा गुरुकुलमा तीनजना शिष्यहरू आफ्नो अध्ययन पूर्ण गर्नासाथ गुरुका सामु उभिएर आफूहरूले घर जाने अनुमति चाहेको र गुरुको आज्ञा बमोजिम गुरुदक्षिणा समर्पण गर्नलागेको बताए । तिनका कुरा सुनेर सुरुमा त गुरु स्नेहपूर्वक भन्नुभयो -‘ममा शिक्षा प्रदान गरेवापत सम्पत्ति जोड्ने लालसा...